कैलालीमा गोलि चल्यो २ प्रहरी घाइते ! ( हेर्नुस लाइभ भिडियो सहित ) – Amareet.com
कैलालीमा गोलि चल्यो २ प्रहरी घाइते ! ( हेर्नुस लाइभ भिडियो सहित )
by amargeet April 30, 2019, 9:10 am 3k Views
बैशाख १७ कैलाली : कैलालीको लम्कीमा आज बिहान ना ७ ख ९२३३ न काे सिमेन्ट बोकेको ट्रकले ठक्कर दिदा लम्की कि सुनिता रावलको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा पछी घटना स्थलको स्थिती तनाव ग्रस्त छ भिडलाई मिलाउन प्रहरीले २ राउन्ड गोलि चलाएको छ । आक्रोशित स्थानीयको ढुङ्गा प्रहार बाट २ प्रहरी घाइते भएका छन् ।
दुर्घटनामा परि लम्कि बहुमुखि क्याम्पस प्रथम बर्ष मा अध्यनरत सुनिता रावल को मृत्यु भएको हो ।
पढेर घर फर्किने बेला पश्चिम तर्फ सिमेन्ट बोकेको ट्रकले ठक्कर दिएको थियो । उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीको भनाइ छ । ट्रक चालक र ट्रक लम्की प्रहरीले नियन्त्रणमा राखेको छ ।
काठको मुडा होला भनेर टेकेको वस्तु अजिङ्गर भएर निस्किएपछि ,घट्यो यस्तो डरलाग्दो घटना
इन्डोनेशियामा एक अचम्मको घटना घटेको छ । जुन घटना अहिले सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामा भाइरल भएको छ । एक माझी माछा मार्न जादै थिए । त्यसैक्रममा हिड्दै जादा उनले एउटा वस्तुलाई काठको मुडा होला भनेर टेकेर हिडेका थिए । तर जब त्यो उनले टेकेको कुरा अजिङ्गर बनेर निस्केर उनलाई नै आक्रमण गरेपछि उनको होसहवास नै उडेको थियो ।
त्यसपछि उनको र सर्पको लडाई भएको थियो । तर उनलाई सर्पले पुरै बेर्न सुरु गरेसगै उनले कति प्रयास गरे पनि भाग्न सकेनन् । त्यसपछि उनको सँगै गएको साथीहरुले कति छुट्टाउन खोजेपनि नसकेपछि त झनै गाह्रो भएको थियो । करिब २७ फुट लामो र १०० केजी वजन भएका उक्त सर्पले बेरेपछि उनको ६ जना साथीहरुले टोक्ने मुख थुन्नुका साथै उनलाई छुट्टाएका थिए ।
अजिङ्गरले टोक्नबाट बचाउने मध्येका एक भने , हाम्रो मित्रको खुट्टाबाट अजिङ्गर छुटाउन हामीले कयौं मिनेट दुख गर्नु परेको थियो । माछा खोजि रहेका हामीलाई अजिङ्गर भेटिनु राम्रै कुरा थियो । तर हाम्रो परम्पराले सर्प खानलाई रोक लगाएको छ
तर यति भइसक्दा पनि गाउँ लगेर अजिङ्गरलाई ठूलो पिंजडामा राखिएको थियो । र कयौं दिन पछि वन्यजन्तु अधिकारीहरुले उक्त अजिङ्गरलाई उद्धार गरेर जंगलमा छाडेका थिए । बाकी भिडियोमा
Previous article आज नायिका पूजा शर्माको जन्मदिन,कति वर्ष लागिन् पुजा ? ( हेर्नुस भिडियो फोटो फिचर )
Next article नायिका पूजा शर्माको अन्तर्वार्ता मै भित्रि बस्त्र देखेपछि… ( हेर्नुस भिडियो )